. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၁၉-၀၇-၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၁၉-၀၇-၂၀၁၅	11
. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၁၉-၀၇-၂၀၁၅
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 19, 2015 in My Dear Diary | 11 comments
. မြတို့ မျိုးရိုး သည် နယ် ဖက်မှ ဖြစ်သည်။
အဖေ့ ရဲ့ ဇာတိမြို့ က ပလာတာ နာမည်ကြီး ဖြစ်သည်။
အဖေ့ အဖေ ရဲ့ မြို့လေး က တော့ နာမည်ကြီး ခေါက်ဆွဲ ကို အမည်တပ်ခေါ်နိုင်သည်။
အဖေ တို့ ညီအစ်ကို အတွက် အဖိုး က မြင်းကြီးများ ဝယ်ထားသည် ဟု ပြောသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ အဖေ့ ရဲ့ ငယ်ပုံပြင်ထဲ က မြင်းနက် ထွားထွား ကြီး များ မြင်ယောင်ကြည့်မိသည်။
. မြရဲ့ အဖိုး သည် စီးပွါးရှာကောင်း ပုံရခဲ့သည်။
သက်တမ်း တော့ သိပ်မရှည်လိုက်။
အဖေတို့ ဆယ်ကျော်သက် မှာ ဆုံးခဲ့သည်။
. မြတို့ ကလေးဘဝ ငယ်ငယ် က မြ တို့ ကို ထိန်းပေးသည့် လင်မယား ရှိသည်။
အဖိုး ရဲ့ ကားဒရိုင်ဘာ လင်မယား လို့ ပြောသည်။
သူတို့ သည် မြ ရဲ့ အဖေ့ ကိုလဲ ငယ် ကထဲ က ထိန်းလာသူများ ဖြစ်သည်။ မြ ရဲ့ အဖေ ရန်ကုန် ပြောင်းချိန် သူတို့ ပါ ပါလာကြသည်။
ထို လင်မယား တွင် အဖိုးကြီး ဆုံးတော့ အဖွားကြီး ကို အဖေ က အိမ် ကို ခေါ်ထားခဲ့သည်။
ထို အဖွား ဆုံးချိန် အဖေ့ ကို ပစ္စည်းလေး တစ်ခု အမွေ ပေးခဲ့သည်။
“လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် တတိယဆင့်” ဟု ရေးထားသော တံဆိပ်လေး ဖြစ်သည်။
တန်ဖိုး ရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း အဖေ သည် အမြတ်တနိုး သိမ်းထားသည်။
အဖေ အမြတ်တနိုး ထားလွန်းသည့် ပစ္စည်းတွေ ထဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ မှန်ဘောင်သွင်း ဓာတ်ပုံ ကြီး လဲ ပါသည်။
. မြတို့ ကြီး သည် အထိ ဧည့်ခန်းထဲ ချိတ်ထားသည်။
၈၈ အပြီး မှာတော့ ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ရသည်။
အဖေ့ ရင်ထဲ တွင်တော့ ထို ပုံ သည် အမြဲ ရှိမည် ကို ယုံသည်။
ထို သွေးသည် မြ ဆီ ကို ကူးလာသည် ဟု ထင်သည်။
.မြတို့ သိတတ်ခါစ အရွယ်ထဲ က အာဇာနည် နေ့ ဆို ရေဒီယို ဥဩ ဆွဲသံ ကို နားထောင်၍ အလေးပြု ရသည်။
ဘာလို့ မှန်းမသိ။ မေလှမြိုင် သီချင်း နားထောင်ရင်း မျက်ရည်ဝိုင်းလေ့ ရှိခဲ့သည်။
. မြ အဖေသည် တာဝါလိန်း ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက် သို့ မြတို့ မောင်နှမ တွေ ကို နှစ်တိုင်းပို့သည်။
ထို အိမ်ရှေ့ရှိ အောင်ဆန်းလင်း ရေနှစ်သည့် ရေကန် လေး ကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းခြင်း ကြီးစွာ ဖြစ်ရသည်။
. မြ အသက်ကြီး လာချိန် အောင်ဆန်း သမိုင်း စာ တွေ ကို ဖတ်သည်။
ထိုစာများ မှ သူ့ရဲ့. ကောင်းသည့် အကျင့်များ သာမက ဆိုးသည့် အကျင့် များ ကိုလဲ မြင်မိသည်။
သမိုင်းထဲ ဇာတ်ကြမ်းတိုက်ခဲ့ သော အဖြစ် တစ်ခု ကို လဲ ဖတ်ဘူးသည်။
သို့ပေသည့် သူ့လုပ်ရပ်တိုင်း ရဲ့ နောက်မှာ သူ့ရဲ့ စေတနာ သူ့ရဲ့ မေတ္တာ ကို အထင်းသား မြင်နေရသည်။
မှားသည် မှန်သည် ဆိုသည့် ဝေဖန်သည့် အကြောင်းများသည် သူ့ရဲ့ တိုင်းပြည် လူထု အပေါ်ထားခဲ့သည့် ကြီးမားသော သစ္စာတရား အောက်မှာ ကျန်ခဲ့သည်။
ဘာပြောပြော အောင်ဆန်း သမိုင်း သည် ဘယ်အခါမှ မရိုင်းခဲ့။
သူ့ စကား တွေ ကို နားထောင်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မရိုး ခဲ့။
သူ့ အကြောင်း မှတ်တမ်း တွေ ကို ဖတ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မပျင်းခဲ့။
ထို မှတ်တမ်း တွေထဲ ရီရမလို ငိုရမလို အဖြစ် တွေ ကိုလဲ ဖတ်ဖူးသည်။
. ပြည် ရွှေတောင် မှ တစ်ဆင့် ရခိုင် သို့ အသွား ဖွတ်ချက် ဖွတ်ချက် ကားစုတ် လေး ပျက်သည့် အကြောင်း ထဲ ကိုအောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ကားဆင်းတွန်း ရသည် ကို လဲ မြင်ယောင်ခဲ့လိုက်သည်။
. မြပြုံးခဲ့ မိသည်။
အဖေတို့ ငယ်စဉ်က မြ ရဲ့ အဖိုး မှာလဲ ဖွတ်ချက်ချက် အော်စတင်ကားစုတ် အမဲ လေး ရှိခဲ့ဖူး၏။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြည် ရွှေတောင် ဆက်တွေပေါ့။
ပေါင်းတည်မှာ ၃ နှစ်လောက် နေဖူးသဗျ။
အစားအသောက်နဲ့ ရာသီ လေးကောင်းသော်လည်း အညာလောက် မပျော်၊
အဲဒီဘက် အဆက်တွေက ဖြူဖြူချောချောတွေနော်။
အဲဒီ ဘက်က လူတွေက သတ္တိအရာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတာပဲ။
မြစပဲရိုး says: ပထမ မှတ်ချက်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ “မရှိမဖြစ် ဇီ” ကလေး။
. ဒေါ်ရွှေကြည် လေး လဲ အဲဒီ အဆက် ထဲ က တစ်ဆက်ပေါ့။
သတ္တိကောင်းမကောင်း တော့ မသိဘူး။
အဖေ က လက် တော့အင်မတန် မြန် တယ်။
သား တွေ က အားလုံး လူကြောက် တွေ ချည်းဘဲ။
သမီး က မှ သူ့သွေး နီးသေး။ lol:-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: မွသဲ ရော မွနှင်းရော က ပေါင်းတည် ဆက် တွေ
မြစပဲရိုး says: အမျိုး တွေ ရွာထဲ ရှိနေတာ မသိဘူး။
. ကြုံ ရင် အမျိုးစပ်ကြည့်ဦးမယ်။
. ပေါင်းတည် မှာ အမျိုးတွေ အများကြီး။
Thanks ဇီကလေး။ ဒါကြောင့် မရှိမဖြစ်ပါလို့။ :-)))
ဦးကျောက်ခဲ says: ပြည် ရွှေတောင် ပေါင်းတည် တကြောမှာ…
နှင်းနှင်း အမေဘက်က အမျိုးတွေ အတော်များတယ်…
ဆွေမျိုးစပ်ချင်ရင် သူ့ကိုမမေးနဲ့ … ဘာမှမသိ… ဟိ
ကျောက်စ်ကိုသာ… မေးပါလှည့်… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: သများတို့ နေခဲ့တဲ့ လမ်းထိပ်မှာ
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်ရဲ့ မိုးညအိမ်မက်မြူ အိမ် ရှိပါတယ် ခင်ညာ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုလတ်ကြီးသာ ဒီမှာရှိနေရင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နံဘေး မှာရောက်နေလောက်တယ်
မြစပဲရိုး says: မှတ်ချက်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပေါက်ကြီး ရယ်။
ကျွန်မ တစ်ချိန်လုံး သူ့အနားမှာ အဝေး ကနေ ရှိနေခဲ့တာပါ။ :-))
ဒီအတွက် ဒီရွာ နဲ့ ဒီ သူကြီး ကို ကျေးဇူး အမြဲတင်ပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ တရားဝင် သူ့ အရိပ် မိုးပေးနိုင်ခဲ့ရင် အဲဒီ မြေ ကို ကျွန်မ ပြန်လာမှာပါ။
လိုတဲ့ ကွက်လပ် တွေ ဖြည့်ဖို့ပေါ့။
အဖွား မြို့လေးပြန်ပြီး ကလေး တွေ ကို စာသင်ပေးချင်တယ်။
အဲဒီ မှာ ကျွန်မ ဆပ်ရမဲ့ အကြွေးတွေ ရှိနေတယ်။
ထမင်းဝ ဖို့ အတွက်ကိုတော့ တစ်ဖက်က တစ်ခြား ပညာတစ်ခု နဲ့ အလုပ်တော့ လုပ်ရမယ်ပေါ့။
ကျွန်မ အိမ်မက်ပါ။ တကယ်ဖြစ်မဖြစ်ကတော့ … :-))
Ma Ma says: အိပ်မက်ကလေးအတိုင်း ပြည့်ပါစေလို့ ၀ိုင်းဆုတောင်းပေးမယ်။
(သမီး က မှ သူ့သွေး နီးသေး။) ……
ဘယ်သူနဲ့ဆိုတာ သိတယ်ဟုတ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ဘာရေးရမှန်း မသိလို့ ၁၂ ကျပ်ပဲ ယူသွားမိတယ် အရီးရယ်
ခွင့်လွှတ်နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .မရိုးနိုင်ဘူးဗျာ..ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းဖွဲ့နွဲ့တဲ့လူတွေကလည်းအဖွဲ့အနွဲ့ကောင်း..ကိုယ်တွေကဖတ်ပြီးဖီးလ်တက်..
အောက်ပါ ကဗျာသည် မေမြို့မှ အမည်မသိ လူငယ်တဦး ရေးစပ်ခဲ့သော ကဗျာဖြစ်ပြီး ကြိုက်လွန်း၍ ဆိုကာ စာရေးဆရာ ညီမင်းညိုမှ စာပေဟောပြောပွဲများတွင် အခါအားလျော်စွာ ရွတ်ဆိုခဲ့ဘူးသော ကဗျာ ဖြစ်ပါသည်။
“ကျုပ်မှာ ကာမပိုင်နဲ့ဗျ” တဲ့။
စကားချပ်။…။ Comment များ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဤကဗျာကို ရေးသားသူသည် ကဗျာဆရာဟိန်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၄၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်တွင် စစ်ကြပ်သင်တန်း ဘွဲ့နှင်းအပ်ပွဲ၌ စစ်ဝန်ကြီး မေဂျာဂျင်နရယ် အောင်ဆန်း၏ မိန့်ကြားချက်.
ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့တာဝန်ဟာ အရင်တုန်းက အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က တပ်များလို ကြေးစားမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံနဲ့အမျိုးကို တကယ်ကာကွယ်ဖို့ပဲ။ ဒီသဘောကို ရဲဘော်တို့ဟာ မိမိရရနားလည်ပြီး ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်ကျေပွန်အောင် လုပ်ကြရမယ်။
ဒီတပ်မတော်ဟာ ဒီနိုင်ငံ၊ ဒီလူမျိုးအတွက် ဒီလူမျိုးတွေရဲ့ ကိုးကွယ်ရာ၊ လဲလျောင်းရာ၊ ဆည်းကပ်ရာဆိုတဲ့ အနေမျိုးဖြစ်ရမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဒီတပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အော့နှလုံးနာစရာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီတပ်မတော်ကို တည်ထောင်ထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အလကားပဲဖြစ်မယ်။ ရဲဘော်တို့ ဒီမှာလာပြီး ဆင်းရဲရတာတွေ၊ နောက် တပ်ထဲမှာ ဆင်းရတာတွေ၊ စစ်မြေပြင်မှာ စွန့်ရမှာတွေအားလုံး အချည်းအနှီးဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတပ်မတော်ဟာ ပြည်သူ့တပ်မတော်လို့ တစ်နိုင်ငံလုံးက ယုံကြည်အားကိုးလာအောင် ရဲဘော်တို့ဟာ မိမိတာဝန်များကို ထမ်းရမယ်”
ဤစာစု ဖြင့် ကျေးဇူးရှင် ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အား အလေးပြုပါသည်။ .နာမည်ကြီး ပြည်ပလာတာတော့ ပြည်ရောက်တိုင်းစားဖြစ်တယ်